Home / Interior design / Fandikana habaka misy loko, fahatsapana ny fiainana mifoha | Haili Design
2021 / 05 / 22 FisokajianaInterior design 6892 0
Mampindrana ny loko mamirapiratra amin'ny avana
Manome fiainana tsy misy afa-tsy rahona sy zavona
Mandehandeha amin'ny natiora, tsotra sy tsotra, miaina voajanahary, izany dia fanjakana mahazo aina indrindra. Manantena ny hamolavola ny habaka amin'ny loko maoderina ny mpamorona, manatsara ny fiainana amin'ny famolavolana loko sy singa mifangaro, ary mitarika ny sisiny amin'ny hevitra famolavolana tantara.
98㎡Modern / lamaody
Manantena ny hamolavola sehatra kanto maoderina amin'ny alàlan'ny fifamatorana amin'ny alàlan'ny natiora sy ny habaka ny mpamorona, avy amin'ny tena toetran'ny fiainana, mampiasa geometry sy tsipika maro hanitarana ny halalin'ny habakabaka, manokatra ny rojom-bolo, miverina amin'ny lalina indrindra faniriana ny fanahy, ary zahao ny fiainana maha-olona mahazo aina indrindra.
Ao amin'ny habaka iainana, ny faritra fisakafoana sy lakozia no toerana be mandoro indrindra. Voaravaka jiro manga haingon-trano tsy manam-paharoa, lasa mahaliana koa ny faritra fisakafoana. Mihisatra eto ny fahasarotana rehetra, mankafy fialan-tsasatra amin'ny sakafo, mahatsapa ny fahalemen'ny gilasy mitsonika ao am-bava amin'ny fahavaratra, ary mihaino ny bitsibitsiky ny fitiavana amin'ny rivotra mamakivaky ireo ravina.
Ny fehin-kibo abstract eo amin'ny rindrina sy ny firafitry ny fandriam-bolo dia mamorona counterpoint, miaraka amin'ny kojakoja haingo kanto sy lohan'ny fandriana lamba malefaka, ny habaka dia manome filaharana kanto sy mirindra ankehitriny.
Ny fiainana dia mitovy isan'andro isan'andro, saingy mahafinaritra izany noho ny firindran'ny tsiro mamy sy marikivy, mangidy ary masiaka. Ny habaka maivana sy tsotra dia voaravaka tsipika maivana sy mihaja hanisy sosona sy firafitra. Ny tsiro sy ny fomba kanto dia manaitra tokoa.
Ny fampitahana ny kabinetra misy siny sy ny sary hosodoko ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny faharoa dia manome fiheverana mahaliana ny toerana lemaka am-boalohany. Izy ireo dia samy manana ny toerany fitehirizana ary maneho amin'ny fomba feno ny hatsaran'ny fiainana. Ny sary hosodoko amin'ny rindrin'ny efitrano faharoa dia miako miaraka amin'ny kaontera sy ny fanenomana, mihidy ao amin'ny tionelin'ny fotoana sy ny habaka.
Ny efitranon'ireo ankizy dia toy ny fampisehoana kanto an'ny "Alice in Wonderland". Manentana ny ankizy izy ireo hieritreritra momba ny kanton'ny fiainana ary hamboly fahatsapana hatsarana ambony. Ny lamba voafantina miaraka amin'ny atmosfera angano dia lalao mety indrindra, hita taratra ny fidiran'ny toerana ho an'ny estetika. Manolotra ny nofin'ilay andriambavy amin'ny zava-misy izy ary mandika tanteraka ny endrika famolavolana ny "art of living and art of living".
Karazana trano II
115㎡Moditra / Volondavenona kanto
Ny volavolan'ity tranga ity dia mampiasa volondavenona sy beige ho loko lehibe. Izy io dia mifanaraka amin'ny rindrambaiko voafaritra tsara amin'ny fahadiovan'ny endrika sy ny loko. Ireo tsipika mikoriana mivezivezy manerana ny habakabaka, ary ny fifangaroana tsipika sy ny habakabaka dia mahavita mandanjalanja ny lamaody sy ny hafanana. Izany dia mahatonga ny sehatry ny zavakanto mahaliana hiseho tsara kokoa.
Miaraka amin'ny fomba famolavolana madio indrindra handikana ny habaka, ny fahitana endrika madio indrindra hanatsarana ny fiainana, ary ny hevitra momba ny endrika madio indrindra hitarihana ny sisintany. Ao amin'ny drafitra famolavolana, manaja ny fahombiazan'ny fitaovana izahay ary mandinika ny endrik'izy ireo manokana sy ny lokony.
Ny efitra fandraisam-bahiny dia voazarazara ary lasa efitrano dite, amin'ny alàlan'ny fitambaran'ny toetra voajanahary sy ny toe-tsaina maha-olona, ​​ny habaka, ny asa-tanana ary ny fiovan'ny hazavana voajanahary sy ny alokaloka ary ireo singa ara-habaka hafa dia napetraka isaky ny santimetatra amin'ny habaka, manokatra dia tsy manam-paharoa sy mahafinaritra ny fotoana sy ny habaka.
Ao amin'ny firavaka miravaka, ny haingon-trano tsy manam-paharoa dia voafidy mba hahatonga ny habaka iray manontolo hanana tsiro marefo sy lamaody. Ireo seza hoditra voafantina miaraka amin'ny latabatra fisakafoana marbra izay mifanaraka amin'ny tontolo iainana dia manome rivo-piainana ambany nefa mirentirenty, mahita tononkalo sy toerana lavitra ao amin'ny trano mando misy sakafo telo ho an'ny olona maromaro ao anatin'ny vanim-potoana efatra.
Ny haben'ny efitrano fatoriana lehibe dia mifototra amin'ny famolavolana tany am-boalohany, ary ny toerana misy ny varavarana dia ahitsy mba hahatonga ny habaka hanana fombafomba kokoa. Ao amin'ny drafitra famolavolana, manaja ny fahombiazan'ny fitaovana izahay ary mandinika ny endrik'izy ireo manokana sy ny lokony.
Ny efitrano fatoriana faharoa dia mamafa ny fahafinaretan'ny lasa. Izy io dia mampiasa fanaka malefaka isan-karazany amin'ny tsipika, fitaovana ary mampiseho hatsikana fa tsy mendri-piderana. Ireo tsipika malefaka sy malefaka dia toa torimaso sy torimaso, manaitra ny fotoana. Eo ambanin'ny famaritana hazavana mafana dia maneho ny hakanton'ny hatsaran-tarehy mihaja sy toetra milay fatratra, matotra, mavesatra ary feno.
Ny tetikasa dia fananganana sy fandaminana indray ny varavarankely mitsingevana, izay tsy vitan'ny hoe mahafeno ny filan'ny fandalinana any an-trano, ny birao ary ny fialam-boly, fa manasongadina ihany koa ny foto-piainan'ny fianakaviana.
Plan Drafitra fananganana tetikasa
Anaran'ny tetikasa | Efitra modely ao an-tranon'ny sekoly Zhongliang Lugang
Fananana | Zhongliang Real Estate
Tetikasa | Showroom
Faritra famolavolana | Manodidina ny 98㎡ / eo ho eo. 115㎡
Previous :: Inona ny tohatra mihodina vy? Next: Biriky maitso sy tsanganana mena, ny fanehoana zavakanto ny maritrano nentin-drazana│IN.X Volavola